ပြင်ပမှာပါမက အွန်လိုင်းပေါ်မှာမှာ မလုံခြုံတော့တဲ့ အခြေအနေမှာ အွန်လိုင်းလုံခြုံရေ… – PVTV Myanmar
ပြင်ပမှာပါမက အွန်လိုင်းပေါ်မှာမှာ မလုံခြုံတော့တဲ့ အခြေအနေမှာ အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးကို မိမိကစကာကွယ်နိုင်ဖို့ ဘယ်လို အချက်အလက်တွေကို ဆန်းစစ်ဖို့ လိုတာလဲ၊ ဘယ်လို အလေ့အထတွေရှိသင့်တာလဲ
စတဲ့ စတဲ့ အခြေခံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအလေ့အထတွေအကြောင်း ဆွေးနွေးပေးထားတဲ့ တော်လှန်ရေးနှင့် နည်းပညာအစီအစဉ်ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီမိုးမှောင်တုန်း မောင်ပုန်းနေရသော အချစ်မတိုးတဲ့ စနစ်ဆိုးကြီးထဲမှာ သင့်ရဲ့အွန်လိုင်းပေါ်က လုံခြုံရေးအတွက် ကျွန်တော်တို့ အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်သွားတဲ့ အွန်လိုင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များကို လိုက်နာပေးဖို့ ထပ်မံတောင်းဆိုရင်း နောင်လာမယ့် တော်လှန်ရေးနည်းပညာအစီအစဉ်များကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦး ခင်ဗျာ။
Like – 5.5K Share – 977
2021-06-17 at 9:08 PM
Ko Bo Soe says:
2021-06-17 at 9:30 PM
Naing Myo Aung says:
2021-06-17 at 9:35 PM
That is very useful. Thanksalot
Minh Thiri Aung says:
2021-06-17 at 9:45 PM
Look likeamillions dollar!!!Thank for your kindness
2021-06-17 at 9:54 PM
2021-06-17 at 9:57 PM
2021-06-18 at 3:34 AM
ပြည်တွင်မှာအင်နက်သုံတဲ့ သူငယ်ချင်းများ လုပ်ထာသင့်တယ်နော်
2021-06-18 at 7:52 AM
2021-06-18 at 8:18 AM
Ga Lay says:
2021-06-18 at 11:38 AM
ShEe PoEe says:
2021-06-18 at 2:28 PM
FB တွေ ဘန်းခံရတော့
VPN ခံသုံးမှ FB ဝင်ကြည့်
မိခဲ့ကြဖူးတယ် ။ ကိုယ့်ကိုနောက်
အခြေအနေကို VPN က ပြန်
ကာကွယ် ပေးနေတာ သိရတော့ ကျေးဇူးတောင်တင်မိသလိုပါပဲ ။
မိတာက VPN ဟာ မြန်မာ
နိုင်ငံက အတွက် အခုချိန်မှာ
2021-06-18 at 6:15 PM